Brax: Mamorona, amboary, ary ampitomboy ny dokam-barotrao avy amin'ny dashboard tokana | Martech Zone
Alatsinainy 7 Febroary 2022 Alatsinainy 7 Febroary 2022 Douglas Karr
Ny ankamaroan'ny fahasarotana amin'ny fiaraha-miasa amin'ny tambajotra Native Advertising dia ny fahasarotan'ny fiasana amin'ny tambajotran-doka sy ny fitaovany handrefesana, hampitaha, hamoronana, hanatsara ary handanja ny doka teratany anao.
Brax: Tantano amin'ny toerana iray avokoa ny doka teratany
Brax dia sehatra dokam-barotra teratany ho an'ny fitantanana betsaka, ny tatitra mitambatra ary ny fanatsarana tanjona mifototra amin'ny fitsipika manerana ireo loharano. Brax dia manamora ny fampitahana votoaty manerana an'i Yahoo Gemini, Outbrain, Taboola, Revcontent, Content.ad, ary ny hafa. Miaraka amin'i Brax, azonao atao ny mandrefy ny fahombiazan'ny fampielezan-kevitra miaraka amin'ny angona fandraisana anjara, fiovam-po ary varotra efa misy mba hanamafisana ny tetibola, tolo-bidy ary hanao fanitsiana ny mpamoaka lahatsoratra. Azonao atao ny mampifandray kaonty maromaro hitantana marika maromaro sady manampy mpampiasa maro manana alalana fidirana.
Brax dia ahafahanao:
Dashboard iray, ny kaontinao rehetra - Mampifandray kaonty marobe hitantana marika, fampielezan-kevitra ary fantsona am-polony, ao anatin'izany ny Outbrain, Taboola, Yahoo, Revcontent, ary Content.ad. Avy eo ampitahao ny zava-bita manerana ny fantsona.
Fanitsiana betsaka ny tetibola, tolo-bidy, & maro hafa - Havaozy indray mandeha ny fampielezanao REHETRA. Ny Native Power Editor an'i Brax dia ahafahanao manova ny lafiny rehetra amin'ny fampielezan-kevitrao (amin'ny tonian-dahatsoratry ny takelaka mahazatra) ho an'ny fandefasana haingana kokoa sy fanatsarana.
Optimize ho azy mifototra amin'ny zava-bita - Mametraha fitsipika tsotra vitsivitsy, ary i Brax dia hanatsara ny fampisehoana dokao ho anao. Azonao atao ny manitsy manodidina ny KPI rehetra, manomboka amin'ny "fotoana eo amin'ny tranokala" mankany amin'ny "vidiny isaky ny hetsika" - midika izany fa tsy mora ny mampiato ny doka miaraka amin'ny firotsahana ambany, manome valisoa ny toerana tsara, manilika ny toerana ratsy, sy ny maro hafa.
Andramo ny famoronana manerana ny fampielezan-kevitra sy ny tambajotra – A/B fitsapana fiovaovan'ny famoronana ho an'ny votoaty tsirairay manerana ny fampielezan-kevitra sy ny tambajotra.
Manaova fanapahan-kevitra mifototra amin'ny angona azo itokisana sy azo itokisana – Manaova veloma amin'ny angon-drakitra maloto avy amin'ny fahadisoan'ny olombelona, ​​ary ny fandaniam-baovao very maina noho ny fiheverana diso. Miaraka amin'ny Brax, ianao dia mamaritra indray mandeha ny marika fanaraha-maso mba hahazoana angona marina sy tsy miovaova mandrakizay. Mampiasà macro mba hampidirana amin'ny fomba mavitrika ny anaran'ny fampielezan-kevitra, ID-doka, ary ID mpamoaka.
Tantano ny fidirana amin'ny ekipa sy ny fahazoan-dàlana - Mitantana mora foana ny mpampiasa sy ny haavon'ny fahazoan-dàlana. Avelao ny fidirana amin'ny alàlan'ny andraikitra, fandaminana, na fanentanana. Jereo ny hetsika ataon'ny mpampiasa mba hahitanao hoe iza no nanao inona tamin'ny fotoana inona, ary esory ny fidirana tsy manova tenimiafina.
Refesina ny Marina ROAS ny Dokam-barotrao - Brax dia manome anao fahatakarana tsara kokoa ny fomba fiasan'ny teratany manontolo ho an'ny orinasanao. Ampidiro sy ampidiro ny angona avy amin'ny rafitra misy anao, ao anatin'izany ny Google Analytics — ary jereo ny zava-bita manerana ny fampielezan-kevitra, ny atiny ary ny mpamoaka amin'ny fotoana rehetra tianao.
Atombohy ny fitsapana Brax maimaim-poana mandritra ny 14 andro
Fanambarana: mpiara-miasa amiko aho Brax ary mampiasa ny rohy iandraiketan'izy ireo mandritra ity lahatsoratra ity aho.
Tags: ab testingfametahana dokaadtechbraxcontent.adteratany dokam-barotradashboard dokam-barotra teratanysehatra dokam-barotra teratanydokam-barotra teratany roiati-dohamiverina amin'ny fandaniana dokaRevcontentfadyYahoo Gemini
Nahoana ianao sy ny mpanjifanao no tokony hanao toy ny mpivady amin'ny 2022